» केविन ग्लान तामाङलाई ६ वटा अवार्ड
केविन ग्लान तामाङलाई ६ वटा अवार्ड
२० फाल्गुन २०७६, मंगलवार १३:००
मकवानपुर, २० फागुन । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो नेपाल आईडलको उत्कृष्ट ७ प्रतियोगीहरु छनौट भइसकेका छन् । गाला राउण्डको छैटौँ हप्ताको समाप्तिसँगै चितवनका केविन ग्लान तामाङले जितेको अवार्डको संख्या ६ वटा पुगेको छ । उनले उत्कृष्ट ७ मा प्रवेशका क्रममा एकपटक सर्वाधिक भोट पनि प्राप्त गरेका छन् । केविनले गाला राउण्डको छैटौँ हप्तामा उत्कृष्ट ७ को सोलो प्रस्तुतिका क्रममा थप एक अवार्ड प्राप्त गर्दै अवार्डको संख्या ६ वटा पुराएका हुन् । उत्कृष्ट ७ को सोलो प्रस्तुतिका क्रममा उनले ‘मुक्ति एण्ड रिभाईभल’ ब्याण्डका मुक्ति शाक्यको अवााजमा रहेको ‘चौबन्दि चोलो’ बोलको गीत प्रस्तुत गरेका थिए । उनको गीतमा विशेष अतिथि मुक्ति शाक्य सहित तिनै जना निर्णायकहरुले स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए । उनले गायक मुक्ति शाक्यसँगै स्टेज पनि शेयर गरेका थिए । उनले सो प्रस्तुतिकै आधारमा कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड प्राप्त गरेका हुन् । हेर्नुहोस् भिडियो–
केविन ग्लान तामाङ– नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येका एक प्रतियोगी हुन् केविन ग्लान तामाङ । नेपाल आईडलमा रकिङ प्रस्तुति दिँदै चर्चामा आएका केबिन ग्लान तामाङले गाला राउण्डको पहिलो हप्ता ‘कोकाकोला अपलिफ्टिङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड जितेका थिए । उनले बिरगञ्ज अडिसनमा बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे अवार्ड र गाला राउण्डको तेस्रो हप्तामा बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड समेत जितेका थिए । गाला राउण्डको चौथो हप्ता उनले मेघा श्रेष्ठ, सज्जा चौलागाई र प्रविण बेड्वालसँगै संयुक्त रुपमा कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड पनि जितेका थिए । उनले गाला राउण्डको पाँचौँ हप्ता उत्कृष्ट ८ को सोलो प्रस्तुतिका क्रममा किरण कुमार भुजेलसँग संयुक्त रुपमा कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका थिए । त्यस्तै छैटौँ हप्तामा उत्कृष्ट ७ को सोलो प्रस्तुतिका क्रममा उनले कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड नै जितेका थिए । केविनले उत्कृष्ट ८ को प्रस्तुति पश्चात खुलेको भोटिङमा सर्वाधिक भोट समेत प्राप्त गरेका थिए ।
केविनको भोटिङ कोड एनआई ०२ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०२ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मार्फत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० मा र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सकिन्छ । आदरणिय दर्शकविन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा नेपाल आईडन सिजन ३ को विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।